शेयर बजारमा १ महीनापछि फराकिलो अंकको वृद्धि, ब्याजदर नबढाउने सहमतिले हरियाली | आर्थिक अभियान
शेयर बजारमा १ महीनापछि फराकिलो अंकको वृद्धि, ब्याजदर नबढाउने सहमतिले हरियाली
वैशाख २८, काठमाडौं । साताको चौथो कारोबार दिन बुधवार नेप्से परिसूचक ५६ दशमलव ०६ अंक बढेको छ । नेप्से परिसूचक २ हजार ३६९ दशमलव ६ बिन्दूमा पुगेको हो ।
यस अवधिमा कारोबारमा आएका २२९ धितोपत्रको ५३ लाख ३३ हजार १०९ कित्ता शेयर ३७ हजार ७७० पटकमा रू. २ अर्ब १६ करोड ३९ लाख ९० हजार ७४३ बराबरको शेयर खरीविक्री भएको हो । जेठ महीनाका लागि ब्याजदर नबढ्ने भएसँगै बुधवार शेयर बजारमा उछाल आएको हो । नेपाल बैकर्स सँघको सहमतिअनुसार बाणिज्य बैंकहरुले जेठ महीनामा ब्याजदर नबढाउने भएका हुन ।
केही दिन अगाडि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जेठ महीनामा ब्याजदर बढ्ने बताएका थिए । सोही कारण नेप्से परिसूचक केही दिन घटेको थियो । तर, वाणिज्य बैंकहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँगको छलफलमा बैंकर्स संघले ब्याजदर नबढाउने सहमति भएको हो । निर्वाचनको लागि खर्च बढेको र सरकारको विकास खर्चसमेत बढ्ने क्रममा रहेकोले जेठ महीनामा ब्याजदर नबढाउने निर्णय भएको छ । वाणिज्य बैंकले एक वर्षको मुद्दति निक्षेपमा ११ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत ब्याजदर दिनेछन । नेप्से परिसूचक बढेसँगै कारोबार रकममा पनि बढेको छ । मंगलवार रू. १ अर्ब ३५ करोड बराबरको शेयर खरीद विक्री भएको थियो ।
बुधवार कारोबारमा आएका २२९ धितोपत्र मध्ये ८ कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । नेशनल हाइड्रोपावर,नेपाल फाइनान्स,सिनर्जी पावर डेभलपमेण्ट ,राधी विद्युत कम्पनी,युनिभर्सल पावर कम्पनी र जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तको शेयर मूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा बुधवार १० प्रतिशतका दरले र गणपति लघुवित्त वित्तीय संस्था र युनियन हाइड्रोपावरको शेयर मूल्य ९ दशमलव ९९ प्रतिशत वृद्धि भएसँगै सकारात्मक सर्किट लागेको हो । त्यसैगरी बुधवार ८.५∞ सानिमा डिबेञ्चर २०८७ नामक ऋणपत्रको मूल्य १ दशमलव ६३ प्रतिशत घटेर रू. ८४५ कायम भएको छ । त्यसैगरी दोस्रोमा सानिमा इक्वीटी फण्डको इकाई मूल्य १ दशमलव ५१ प्रतिशत घटेर रू. १३ दशमलव ०६ कायम भएको हो ।
बुधवार सार्वधिक शेयरखरीद विक्री अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनीको भएको छ । कम्पनीको रू. १० करोड ५९ लाख बराबरको शेयर खरीद विक्री भएको हो । कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. ४५० कायम भएको छ । त्यसैगरी सर्वाधिक शेयर खरीदविक्री गर्ने दोस्रोमा ङादी ग्रुप पावर कम्पनीको रू. ८ करोड ७३ लाख बराबरको भएको हो । कारोबारमा आएका १३ओटै समूहगत परिसूचक समग्र बढेसँगै नेप्से परिसूचक बढेको हो ।
१३ समूह मध्ये सबैभन्दा बढी हाइड्रोपावर समूहको परिसूचक ४ दशमलव ९७ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी बैंकिङ्ग समूहको समूहगत परिसूचक १ दशमलव ४९ प्रतिशत,विकास बैंक समूहको ३ दशमलव ७५ प्रतिशत,वित्त समूहको ४ दशमलव ३५ प्रतिशत,होटल एण्ड टुरिजम समूहको १ दशमलव ७८ प्रतिशत,लगानी समूहको ३ प्रतिशत,जीवन बीमा समूहको १ दशमलव ८२ प्रतिशत,उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको १ दशमलव २९ प्रतिशत,लघुवित्त समूहको ३ दशमलव २६ प्रतिशत,म्युचुअल फण्ड समूहको शून्य दशमलव ८३ प्रतिशत,निर्जीवन बीमा समूहको २ दशमलव ३९ प्रतिशत,अन्य समूहको १ दशमलव ७९ प्रतिशत र ब्यापार समूहको परिसूचक १ दशमलव ०२ प्रतिशका दरले बढेको हो ।